Daraasad Haweenka uga Digtay inay Qabatimaan Cuntooyinka Qaarkood
Daraasad cusub oo dhinaca caafimaadka ah oo ay dhowaan soo saareen khubarro Maraykan ah ayaa lagaga digay cuntooyinka qaarkood, iyada oo cuntooyinkaasi si gaar ah loogaga digay haweenka.
Haweenka ayaa la sheegay in ay cuntooyinkan si fudud uga qaadaan xannuunka Cancer-ka , gaar ahaana Kansarka ku dhaca Naasaha. waxa kaloo iyagana looga digay inay cuntadaasi cunaan dumarka xannuunkaasi qaba.
Khubarrada daraasadan samaysay, ayaa sheegtay in maadooyin ku jira cuntadan oo ay kamid tahay maaddada loo yaqaanno Estrogen-tu ay ku samayso Naaska guntimo yar yar oo dhiig ah, taas oo ka dhigi karta Kansar.
Sidoo kale dumarka xanuunkan la nool, ayaa si adag loogaga digay inay cuntadan oo ay ka mid yihiin Fuulka, Lawskuba ay cunaan , waxaanay khubarradu sabab uga dhigeen in maaddadan ku jirta cuntadaas ee Estrogen-tu leedahay awood ay kula dagaalami karto dawooyinka ay dumarkaasi qaataan.
In ka badan 200,000 oo haweenka Maraykanka ah ayaa la nool xanuunka Kansarka Naaska ku dhaca, waxaanay khubarradu iftiimiyeen in 65% haweenkaas kamid ahi ay dawadii ka hor istaagtey maaddada Estrogen-tu, taas oo keentay in aanay dawaddu sideedii u gaadhin.
Xannuunka Kansarka Naasaha ee haweenka ku dhaca, ayaa lagu daweeyaa dawooyin dhir laga sameeyey iyo dawo kale oo lagaga hor tago maaddadaasi Estrogen-ta, kuwaas oo ka hortaga inuu koro ama fido xannuunka unugyadiisu, sida lagu daabacay Wargeyska Daily Mail oo uu Wargeyska Dawan qormadan kasoo xigtay.
Xeel-dheereyaasha daraasadan sameeyay oo ka tirsan jaamacadda Maraykanka ku taalla Scripps University oo ku taalla California qaybteeda Caafimaadka, ayaa natiijadii darasadoodan kula taliyey haweenka inay iska ilaaliyaan isticmaalka badan ee cuntadaasi, iyaga oo si gaar ahna ugu digay dumarka la nool Kansarka Naasaha ku dhaca.